‘हब ब्राण्डका रुपमा स्थापित छ’ – Arthik Awaj
‘हब ब्राण्डका रुपमा स्थापित छ’
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर २१ गते शुक्रबार ००:०० मा प्रकाशित
सेन्टर म्यानेजर, हब इन्टरनेशनल एजुकेसन
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई बिगत १३ वर्षदेखि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हब इन्टरनेशनल एजुकेसनले पोखरामा शाखा स्थापना गरेको छ । पोखरामा शाखा स्थापना गर्नुको उद्देश्य, हबका विशेषता लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सेन्टर म्यानेजर राजन पन्थीसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
हब एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका विशेषताहरु के–के छन् ?
हब आफैंमा एक ब्राण्डका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । बिगत १३ वर्षदेखि हामीले विद्यार्थीलाई गन्तव्यमा पु¥याएका छौं । हामीले ७ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीलाई विभिन्न देशमा पठाइसकेका छौं । २० हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले आइएलटिएस, टोफेल, स्याट लगायतका कक्षा लिइसक्नुभएको छ । यसबाट पनि हामी सफल छौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ । प्रोफेशनल टिम हामीसँग छ । अष्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशबाट सर्टिफाइड काउन्सेलर हुनुहुन्छ । क्युएसी र आइसिइएफ सर्टिफाइड टिम हामीसँग छ । कक्षा पनि हामीले व्यवस्थित रुपमा संचालन गरेका छौं । विद्यार्थीले सही परामर्श पाउनुहुन्छ । सत्य तथ्य जानकारी हामी प्रदान गर्छौं । विद्यार्थीमैत्री वातावरण भएका कारण पनि हामी विद्यार्थीको रोजाईमा पर्दै आएका छौं । विद्यार्थी यहाँँबाट गएर गन्तव्यमा पुगेपछि पनि हामी सहयोग गर्छौं यसमा पनि हामी धेरै अगाडि छौं ।
हबमा आएपछि विद्यार्थीले केकस्ता सुविधा पाउँछन् ?
विद्यार्थी हबको कार्यालयमा आइसकेपछि हामीले निःशुल्क रुपमा पर्सनल काउन्सिलिङका साथै प्रोशेसिङ काउन्सिलिङ गर्छौं । प्रोशेसिङ पनि निःशुल्क गर्छौं । विद्यार्थीको भिजा नलाग्दासम्म हामी कत्तिपनि पैशा लिदैनौं । प्रोसेसिङ, डकुमेन्टेसन तथा भिजा एसिसमेन्ट निःशुल्क रुपमा गर्छौं । विद्यार्थीको भिजा लाग्नु मात्र ठुलो कुरा होइन । त्यस पश्चात पर्ने आवश्यक सहयोग पनि हामी गर्छौं । हरेक कुरामा हव ईन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सी धेरै अगाडि छ । आइएलटिएस, पिटिई र जिआरईको कक्षा पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रत्येक हप्ता सेमिनार हुन्छ । कलेज तथा युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि सेमिनारमा आउनुहुन्छ । कलेज तथा युनिभर्सिटकिा प्रतिनिधीलाई विद्यार्थी आफैले भेटेर धेरै कुराको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ।
पोखराबाट कुन–कुन देशमा विद्यार्थी पठाउनुहुन्छ ?
पोखराको सिद्धार्थचोकमा हाम्रो कार्यालय छ । अष्ट्रेलियासँगै क्यानडा, आयरल्याण्ड, न्युजील्याण्ड, युएसए, यु.के, इण्डिया लगायतका देशमा जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिइरहेका छौं । यी देशका कलेज तथा युनिभर्सिटीसँग हाम्रो सम्वन्ध छ । यी देश मध्य अष्ट्रेलिया धेरै विद्यार्थीको रोजाईमा पर्ने गरेको छ । अध्ययनको लािग विदेश जाने ट्रेन धेरै बढेको छ ।
पोखरामा शाखा सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य के हो ?
पोखरामा बिगतदेखि नै धेरै कन्सल्टेन्सी खुलेका छन् । तर प्रोफेसनालिजम भने कम छ । पोखरामा प्रोफेशनल कन्सल्टेन्सीको अभाव महसुस गरेर हामी आएका हौं । प्रोफेशनल तरिकाले कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । हामी उद्देश्य अनुशार सफल पनि छौं । विद्यार्थीलाई सही काउन्सिलिङ गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।
शाखा स्थापनाको छोटो समयमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुुभएको छ ?
पोखरामा यती छोटो समयमा नै यती धेरै सफल हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइन । छोटो समयमा नै हामीले धेरै फड्को मारेका छौं । पोखरामा आएको करिव ४ महिना भएको छ । १० जना भन्दा धेरैको भिजा लागेको छ । विद्यार्थीसँगै अभिभावक पनि आउनुहुन्छ । उहाँहरुबाट पनि हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । विद्यार्थीले पनि पारिवारिक वातावरण भएका कारण सहज अनुभूति गर्नुहुन्छ । यसले पनि हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।
विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई के भन्नुहुन्छ ?
विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई म एक पटक हवमा आउनुहोस भन्न चाहन्छु । अन्य कन्सल्टेन्सीमा भन्दा फरक वातावरण यहाँ पाउनुहुनेछ । विद्यार्थीलाई सही तरिकाले काउन्सिलिङ गर्छौं । कन्सल्टेन्सी छनोट गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिएर मात्र छनोट गर्नुस् भन्न चाहन्छु ।